Energy Kuchengetedza - Green Renewables | Green Renewables (Peji 2)
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuziva nezve substations yemagetsi uye maitiro avo. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
midziyo yekushandisa simba
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve kushomeka kwemidziyo yekushandisa uye maitiro avo. Dzidza zvakawanda pamusoro pekuchengetedza simba.
Mazano uye matipi achakubatsira iwe kuchengetedza pakupisa munguva yechando. Chii chaunofanira kutarisa kuti uzive kana imba yako yakavharwa zvakanaka kubva kunotonhora?
Aerothermal underfloor heat
Muchikamu chino tichakuudza zvese zvaunoda kuziva nezve aerothermal underfloor heat uye zvakanakira.
Kilowatt: zvese zvaunoda kuziva
Muchikamu chino tinokuudza zvose zvaunoda kuziva nezve kilowatt uye maitiro ayo. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuziva nezve thermal inertia uye maitiro ayo. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Matsva emagetsi matsva
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve matsva emagetsi mavara. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Akabuda ropa maharairi
Mune ino chinyorwa tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive kudzidza kubuda ropa ma radiator. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvedzimba dzakagadzikana uye kuti zvakanakirei. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Iwe unoda here kuva neakabudirira ekudzokesa mushandirapamwe uyo unobatsira kusimudzira marara marara? Pinda uye uzive akanakisa matipi.
Hunhu uye nemhando dzedzimba dzimba
Dzimba dzezvakatipoteredza idzo dzimba dzinotora mukana kuzviwanikwa zvezuva nepasi uye zvinoremekedza nharaunda. Iwe unoda kuziva zvakawanda?
Isimba ripi rechiedza rekuhaya
Isu tinokuudza iwe akanakisa matipi ekuti udzidze iro simba rechiedza rekuhaya imba.
Isu tinokuudza matipi akanakisa emafungidziro ebindu uye dzimwe nzira dzekudzivirira. Dzidza zvakawanda pano.
Isu tinokuudza dzimwe dzakanakisa mazano ekugadzira hunyanzvi nezvinhu zvakashandiswazve kumba. Pinda udzidze!
Kudiridza kwekumba kudiridza
Munyaya ino tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive yako yekudonha yekudonha system.
Verenga simba remagetsi
Isu tinokuudza maitiro aunofanira kuverenga simba remagetsi rekuhaya mumba mako uye akanakisa matipi ekuchengetedza.
Rambi rezuva rinozvigadzirira
Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive kuti ungagadzira mwenje wezuva wakagadzirwa sei. Dzidza zvakawanda pano.
Dzidza zvese zvaunoda kuti uzive nezve ICP (Power Control switch) uye kuti inoshanda sei.
Isu tinokudzidzisa iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve dimmer, ayo maitiro uye mashandiro. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Vertical munda wemichero
Mune ino chinyorwa tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve yakamira gadheni uye ayo maitiro.
Tinokuudza zvakadzama zvese zvaunoda kuti uzive nezvemarasha ekugocha uye zvakanakirawo.
Tsvaga pano zvese zvakadzama nezvePasive imba, mhando yeimba ine inoshanda bioclimatic architecture.
Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvegasi zvitofu uye mashandiro azvo. Dzidza zvakawanda nezvavo pano.
Tinokuudza zvakadzama zvese zvaunoda kuti uzive nezvechitofu chehuni. Dzidza zvakawanda nezve mhando uye hunhu hwavo.
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve mashandisiro emvura anoshanda uye kuti ndeapi mabhenefiti. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Mune ino chinyorwa isu tinokuudza iwe hunhu, mashandisiro uye kutarisirwa kweKalanchoe. Dzidza zvakawanda nezve ichi chakanakira chirimwa chekushongedza.
MUONE uye SCOP
Mune ino posvo tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve maacronyms SEER uye SCOP uye kukosha kwawo mukushanda kwesimba kwemagetsi zvigadzirwa.
Isu tinokuudza zvakadzama tsananguro yekuti kushanda nesimba ndekwei uye ndeyei. Ziva kukosha kwekuchengetedza simba kuchengetedza nharaunda.
Mune ino posvo tinokudzidzisa iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve zvakatipoteredza mutemo. Dzidza zvazviri uye zvazviri nemimwe mienzaniso.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezvehydro stoves
Mune ino posvo tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve chii chinonzi hydro stoves, hunhu uye mashandiro avanoshanda. Pinda kuti uzive zvimwe.
Muchikamu chino tinokuratidza izvo zvinhu izvo ovheni yevhu inoda uye maitiro ekuivaka nhanho nhanho. Pinda pano kuti uzive zvakawanda.
Dzimba dzekuchengetera dzimba
Muchikamu chino tinokuudza kuti ndezvipi dzimba dzekuchengetedza dzimba uye kuti ndezvipi zvakanaka zvavanazvo. Dzidza maitiro ekuvaka greenhouse mumba mako.
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve bioethanol fireplaces. Ziva zvakakosha nezvakanakira izvi nzvimbo dzemoto.
Chiedza chinodhura rini?
Isu tinokudzidzisa iwe kuziva kana magetsi achinyanya kudhura kusarudza pakati pemitengo inokodzera zvakanyanya mararamiro ako. Pindai mudzidze nezvazvo.
Muchikamu chino tinokupa matipi ekuti ushandise kuchengetedza simba mumba mako. Dzidza maitiro ekuita kuti imba yako igare yakasimba.
Maitiro ekugadzira ekuzvigadzirira emhepo fresheners
Isu tinokudzidzisa iwe zvese zvaunoda kuti uzive kugadzira zvakasikwa pamba mhepo fresheners. Dzidza kuwedzera imba yako usingashandise chepfu.
Kuchenesa sei hovhoni
Muchikamu chino tinokuudza mamwe eanonyanyo shandiswa ekuziva machenese muchoto nezvigadzirwa. Pinda zvino!
Kana nguva yashandurwa
Isu tinotsanangura kana nguva yacho yachinja. European Union iri kuzobvisa shanduko yenguva. Pinda pano uye uzive zvese nezvazvo.
Kufanana kwema LED mabhuru
Isu tinokudzidzisa iwe zvakakosha zvinhu zvekutarisa mukuenzana kwema LED mabhuru neakajairika iwo. Pinda uye dzidza zvakanakisa.
Kushandiswa kwemidziyo yemumba
Iko kushandiswa kwemidziyo yemumba chinhu chinotarisa mumutengo wemagetsi magetsi. Pano tinokuratidza zvaunofanira kufunga kuti uderedze. Kupinda!
Bioclimatic akitekicha inoshandisa smart zvishandiso kuvaka imba yakasimba zvachose. Pinda pano kuti uzvizive zvakadzama.
Homemade turbine yemhepo
Muchikamu chino tiri kuzodzidzisa maitiro ekugadzira tambo yemagetsi yekugadzira imba yedu. Kana iwe uchida kudzidza zvese nezvazvo, pinda apa.
Girobhu racho remwenje uye tekinoroji yaro nyowani
Girobhu racho rinovhenekera riri kuvheneka dzimba kutenderera pasirese kubva payakagadzirwa. Tichafanirwa kutaura zvakanaka here? Tsvaga pano.
Chinatsa mvura chinokubatsira kunwa mvura yemupombi isina mabhakitiriya uye zvimwe zvinokuvadza. Dzidza zvese nezvazvo pano.
Lumens uye watts. Maitiro ekusarudza girobhu rakanakisa remba yako
Lumens inoyera chiyero chechiedza chinoburitswa negirobhu uye chinoenderana nesimba uye nekushandisa. Dzidza pano nzira yekusarudza yakanakisa mwenje girobhu.
Masitofu ezve ecological anodya mashoma zviwanikwa pane zvakajairika. Dzidza mashandiro avo uye izvo hunhu hwavo mune ino positi.
Chronothermostat yakagadzira mabasa anovandudza kunaka kwekudziya mumba medu. Tsvaga zvese nezvazvo pano.
Kugona kwesimba muzvivakwa kuyera simba rekushandisa rese uye kuchengetedza kunogona kuitwa. Dzidza maitiro ekuvandudza mashandiro eimba yako.
Aerothermal simba inoshanda zvakanyanya uye iri kuwedzera mukurumbira mhepo yekugadzirisa mamiriro kubva pasimba rinowedzerwazve. Ziva mashandiro ayo nemutengo pano.
Chii chinonzi kupisa kwebhuruu?
Iko kupisa kwebhuruu ndiyo nyaya yemazano mazhinji ekutengesa mumwaka unotonhora. Dzidza zvese nezvazvo mune ino chinyorwa.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve zvinopisa emitters
Thermal emitters ndiyo yakanakisa yekupisa sarudzo yeavo makamuri matinopedza nguva yakawanda. Tsvaga zvakwakanakira pano.
Magetsi mbatya rack
Iyo mbatya yemagetsi inopa akawanda mabhenefiti pane echinyakare. Dzidza zvese maficha uye mashandiro ainoita pano.
Yakaderera yekushandisa ma radiator
Mashoma ekushandisa ma radiator anobatsira zvakanyanya kuchengetedza simba nemari pabhajeti yemagetsi, Dzidza maitiro ekusarudza yakanakisa modhi pano
Watts, volts uye amps
Watts anoshandiswa zvakanyanya mumunda wemagetsi, asi inowanzo nyonganiswa nema volts nema amps. Iwe unoda kudzidza kusiyanisa yega yega?
Iyo Stirling injini inozivikanwa nekugona kwayo kwepamusoro uye kugona kwayo kudzora kusvibiswa. Tsvaga ayo ese maitiro. Kupinda!
Maitiro ekuchengetedza magetsi
Masystem ekuchengetedza magetsi akakosha kuti ugare uine simba rinowanikwa. Dzidza zvese nezvavo pano.
Anopisa mhepo yekuisa mhepo mudziyo wakasanganiswa pakati pemhepo inodzora uye fan. Ziva mamiriro ayo emhepo mamiriro.
Kuchengetedza pakupisa, zvinodziya zvekupisa ndizvo zvakanyanya kukodzera. Iwe unoda here kuziva zvavari uye kuti vanoshanda sei? Zvese zvine chekuita apa.
Thermal pendi chishanduko chinogadzirwa munyika yekudzivirira. Iwe unoda kuziva zvese zvivakwa uye kuti zvinoshanda sei?
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve yemagetsi mita
Mune ino posvo iwe unodzidza nezve zviyero, mashandiro uye kugona kwemamita emagetsi emumba.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve chaiwo gasi boilers
Iyi posvo inotaura nezve izvo gasi chaiwo mabhaira ari uye mashandiro avo uye mhando dzakasiyana dziripo nemitengo yadzo. Iwe unoda kuziva zvakawanda?
Bio-kuvaka, iyo ecological, ine hutano uye inoshanda kuvaka
Bioconstruction inoenderana nekuvakwa kwedzimba dzimba, vachiita kunge vane hutano uye vanoshanda zvakakwana vachishandisa zvisikwa zvinhu.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve bhuruu kupisa maharairi
Iyi posvo inotaura nezve hunhu, zvakanakira nekuipira kwekushandisa bhuruu kupisa maharairi. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezvazvo?
Muchina wekuwachisa michina uye mazano ekuremekedza nharaunda
Kuwacha mbatya kunogara kuchikanganisa zvakatipoteredza nekuda kwekunwa kwemvura, magetsi uye sipo. Neichi chikonzero, michina yekuwachisa ecological yakagadzirwa, ichikwanisa kuremekedza nharaunda.
Dzimba muAlcalá dzichabatsirwa nemagetsi anowedzerwazve
Alcalá de Henares ine chirongwa che "Alcalá District Heating" umo dzimba gumi nembiri dzinogona kubatsirwa nesimba rinowedzerwazve.
Bhiri remagetsi richadzikiswa kana zvinangwa zvekudzikisa CO2 zvasangana
Kusangana nezvinangwa zvekudzikisa mweya zveCO2 zvinoguma nekuderera kunosvika 55% mumabhiri emagetsi.
Organic marara akagadzirirwa kukicheni
Nerubatsiro rweHomeBiogas tinogona kugovera yedu yemarara tsvina kune maviri mashandisiro, kungave kugadzira kompositi kana kugadzira biogas uye nekugona kuishandisa mukicheni.
Castilla-La Mancha inopa simba rinowedzerwazve
Castilla-La Mancha inokurudzira rutsigiro rwesimba uye simba rekushandisa magetsi. Simba rinowedzerwazve rinosarudzwa richava geothermal, mhepo uye photovoltaic simba kuitira kuti vakwanise kuve mudzimba, munharaunda nemakambani.
Makambani eGerman anobhadhara kushandisa magetsi
Germany inokwanisa kuita zvidzikisira pamagetsi emagetsi evagari vayo nerubatsiro rwemagetsi anowedzerwazve.
Iyo Cabildo de La palma ichagovera 200000 maeuro kubatsira mukuzvishandisa-kushandisa
La Palma iri kukurudzira kusimudzira-kuzvishandisa pakati pevagari vayo. Ndeipi pfungwa yako? Ndiyo chete Cabildo inotsigira simba rinowedzerwazve? Chii chinotarisirwa nehurumende yakazvimiririra nezvesimba rakachena?
Tesla inopedza kuvaka kwebhatiri rakakura kwazvo pasirese
Elon Musk akabheja nehurumende yeAustralia kuti bhatiri rizovakwa mukati memazuva zana ekusaina chibvumirano. Kana zvisiri, zvaizove zvemahara.
Kuchengetedza kwezvakatipoteredza, mhando, kuyerwa uye zvinangwa
Tsvaga zvinangwa uye zviyero zvekuchengetedza kwezvakatipoteredza uye nei zvichikosha kwazvo munyika yanhasi
Iyo ecological mini imba inowanikwa yevapoteri muParis
Yekutanga ecological mini imba ichave ichiwanikwa muFrance yekutambira vapoteri. Iwe unoda here kuziva zvakawanda nezverudzi urwu rwezvinhu zvakasikwa dzimba?
Soria, paradhiso yebiomass
Kubva 2015, muSoria gasi kana dhiziri mabhaira ari kuchinjwa nemamwe mabiomass iwo ekuwaniswa kwemvura inopisa uye kudziyisa.
Renewables vanokumbira kuranga avo vanosvibisa
Sechikonzero cheiyo Climate Change uye Energy Shanduko Mutemo, akati wandei masangano anodaidzira kuomesa mutero kune inosvibisa matekinoroji.
Zero zvivakwa ndeavo akavakirwa kuitira kuti simba rekushandisa riite shoma uye riite rakaringana. Iwe unoda kuziva nezvazvo here?
Tesla Powerwall 2 Bhatiri
Isu tinokuudza zvese nezveTesla Powerwall 2, chizvarwa chechipiri cheTesla bhatiri. Izvo zvakasiyana sei nemhando yapfuura?
Zvitima zveHybrid zvine mapaneru ezuva anotanga kutenderera muIndia
Indian Railways inotakura vanhu zviuru makumi maviri nematatu uye 23 mamirioni ematani ezvinhu zuva rega rega. Ukuru hwehuwandu hunoda shanduko yemuenzaniso
Google inoda kushandisa munyu kuchengetedza simba rinowedzerwazve
Google inoda kubheja pakushandisa munyu uye antifreeze kuti ikwanise kuchengeta iyo inowedzerwazve simba ratiri kutambisa.
Muna 2015 Spain yakadzora mashandisirwo ayo ne3%.
Spain yakadzora kushandiswa kwesimba rinowedzerwazve ne3,1% muna2015, yakamira pa13,9%. Kune rimwe divi, muEurope yakawedzera ne9%, ichisvika 13% yeiyo yakazara
Mamiriro ezvinhu emagetsi anovandudzwa muSpain uye maonero e2020
Ikozvino pane zvitatu zvinangwa zvemagetsi, izvo zvinofanirwa kunge zvichitarisirwa pamusika weEurope muna 2020 (iyo inonzi "katatu 20")
Izvo zvinoshamisa mabhenefiti e geothermal simba!
Iyo isimba risingaperi sosi yesimba mazuva makumi matatu nemazana matatu nemakumi matatu pagore, kusiyana nemamwe masisitimu, mamiriro emamiriro ekunze emamiriro epanguva ino haatenderi.
Dzimba dzematanda, maitiro ekuvasarudza, zvakanakira nekuipira
Dzakadii dzimba dzemapuranga, mhando dziripo pamwe nezvakanakira nekuipira pamwe nezviri pamutemo zvekufunga nezvazvo.
Chii chinonzi Dogger Island? Chakagadzirwa chitsuwa icho chaizogadzira simba rinowedzerwazve kune vanhu zviuru makumi masere.
Dogger Island chirongwa cheichi chitsuwa chakagadzirwa, chinogona kupa simba rinowedzerwazve kuvanhu vanosvika mamirioni makumi masere muEurope muna 80. Ichokwadi kana fungidziro yesainzi?
Spain inoramba iro Zuva: kuzvishandisa-pachako uye kusimudzira
Spain inoramba Zuva uye kuzvishandisa kwemazuva, zvichiita kuti vagari vabhadhare mari yavo yakawanda yemagetsi. Hurumende haibheje simba rezuva.
Zvinetso zvezvakatipoteredza zve2017
Isu tiri chizvarwa chekutanga kuve nesu maturusi ekumisa shanduko yemamiriro ekunze uye mamwe matambudziko atinotarisana nawo
Mhando dzakasiyana dzemabhuru, ndeipi yaunofanira kusarudza?
Zvichienderana nemhando dzemabhalbhu auri kushandisa, unogona kudya + kana - simba. Mhando dzemabhalbhu, simba ravo, kunwa, nguva, mutengo uye maitiro.
Aya ndiwo maitiro ekurasa marara munharaunda. Isu tichakuudza kuti marara anokanganisa sei kunaka kwemhepo, ivhu nemvura yatinoshandisa.
Aerothermal inotora mukana wesimba ririmo mumhepo, izvi zviri mukuvandudzwa nguva dzose, zvichishandura mhepo kuita sosi isingaperi yesimba.
ZUVA repasi 2018 ichave Kubvumbi 22
Zuva rePasi 2018 richapembererwa musi waApril 22 senge gore rega. 1970 raive gore rekutanga chiitiko ichi chakaitwa. Renewable simba shanduko
Matanho ekuzadzisa zvinangwa zvemagetsi muna 2030
Gwaro pazvinangwa zvemagetsi muna 2030 rakaburitswa neIEA, World Bank kana IRENA, pakati pemamwe masangano epasirese.
Kugadzira simba uchifamba zvinoita (Pavegen smart mataira)
Kutasva nekumhanya munhandare, nzvimbo dzekutengesa nenhandare yenhabvu inogona kuunza simba uye kudzikisira bhiri nekuda kwePavegen smart tiles
Zvivakwa zvine zero zero simba rekushandisa
MuSpain pane nzira refu yekuenda kutevedzera European Directive 2010/31 kuitira kuti zvivakwa zvivakwe neakawanda simba rekushandisa kubva 2020
America Yekutanga Solar Guta, Babcock Ranch
Guta rekutanga rezuva riri muUnited States uye richazonzi Babcock Ranch, guta rinenge riine chirimwa chezuva, magadheni enharaunda, nezvimwe.
Asia yakagadzirira kuwana Europe mu biomass magetsi
Muna 2015 mutsauko uripo pakati peASIA neEUROPE waive pamusoro pe6.000 MW uye gore rakazotevera rakatosvika 1.500. Evhangeri uye ramangwana rebiomass
Vanoshandisa mvura inonaya kugeza mabhazi
Imwe kambani yemabhazi muMalaga inoshandisa mvura inonaya kugeza mabhazi. Iyi inzira yekuchengetedza nharaunda
Mumakore gumi, zvigadziriswazve chichava sosi yakachipa pane yese yesimba
Muna 2016, 9% simba rimutsiridzwa rakaiswa, nepo 23% shoma yakaiswa pasi kupfuura gore rapfuura nekuda kwekukura kukuru kuri muchikamu.
Greenpeace debunks ngano dzesimba rinowanikwazve
Greenpeace inoti nyika ine simba rakachena kune vese inogoneka uye ndosaka yakazvipira pakubvisa dzimwe ngano dzakakosha.
Kukarukureta lumens simba rokuponesa chiedza Mabumba
Mumagetsi ekuchengetedza magetsi mabhuru tinoaisa zvinoenderana nekuvhenekera kwavo, ine chinhu chinonzi "lumens" icho chinonyatsoratidza huwandu hwechiedza chakaburitswa.
Ndozvakaitawo mataira ezuva anofukidza dzimba mune isiri kure kure ramangwana
Kusiyana nemaphoto e-photovoltaic akaiswa pamusoro pematenga edzimba, mataira ezuva anoshamisa uye ane hunyanzvi hwakaenzana seplate.
Iwo maCanary Islands ari kushandura yavo yemhando yemagetsi: Kubva pamafuta kuenda kumutsiridzo
Matambudziko matatu eiyo Canary Islands simba modhi (uye mhinduro dzadzo). Kubatana pakati pezvitsuwa. Iko kushandiswa kukuru kwesimba rinowedzerwazve. Petroleum
Tesla inoda kuvaka guta rakasimba kwazvo pasirese
Tesla iri kuzovaka guta rakapihwa 100% nesimba rinowedzerwazve, pamwe chete nekutakura kwemagetsi uye nemigwagwa yakakwana yevanofamba netsoka.
Denga re photovoltaic pamatiraki erori raizoponesa 158 litita emafuta pamwedzi
Iko kudzikiswa kwemitengo kunoita kuti photovoltaics irambe ichikwezva kune zvigadzirwa (marori efiriji). Shanduko yesimba rezuva uye ramangwana
Mumakore gumi kubva kuBarcelona kuenda kuMadrid pasina mafuta
Wright Electric akaisa chinangwa chekuvaka ndege yezuva mukati memakore gumi. Evhangeri uye ramangwana remotokari dzemagetsi. Ndege yezuva
Hurumende inodaidza okisheni yemamegawati anokwidziridzwa zviuru zvitatu
Hurumende yakabvumidza RD inosheedzera okisheni inosvika ku3000 MW yetekinoroji dzinowedzerwazve. Evhangeri uye iro ramangwana rezvekudzoserwa muSpain
Kanzuru yeguta reBCN inogadzira mushambadzi wevoruzhinji muSpain
Kutanga yaive Cádiz uye ikozvino iri Barcelona. Guta guru rakasarudza kuita pasina magetsi uye gadzira yayo yega mushambadzi Barcelona Renewable Energy
Castilla y León ichatsigira nemari 3 M € mapurojekiti emagetsi munzvimbo dzakapoteredza
Rubatsiro muCastilla y León. Kushanda nesimba. Kuitwa kwesimba rinowedzerwazve mumaguta. Nyowani yemhepo kutonhodza network muOlot
Fekitori nyowani yaTesla muHawaii: 272 mabhatiri mune imwe
Tesla inoenderera pamwe nehurongwa hwekuwedzera kupa masimba akachena kuzvitsuwa zviri kure muPacific. HyperLoop, SpaceX, Solarcity, Powerwall, Powerpack
Brussels inopomera zvipingamupinyi zvakaiswa neSpain kumagetsi ekuzvishandisa, veto yeCitizens uye iyo PP yekuzvishandisa. Renewable simba shanduko
Kune mari dzekuEurope dzakatanga muna2014 uye dzichapera muna2020 dzine chinangwa chekuvandudza kushanda kwesimba mukati mezvivakwa.
IV naC's veto mutemo wekushandisa wega magetsi
Dare reCongress rakabvumidza, nerutsigiro rwePP neVagari, vhoti yehurumende pamagetsi kuzvishandisa. Shanduko yesimba rinowedzerwazve
Iwe unogona kusevha 22% nesimba rekushandisa
Kushandisa zvine mutsindo kuchengetedza magetsi kwakakosha pakuvandudza mashandiro emagetsi. Ndeapi mazano aripo?
Chii chichaitika muEurope nesimba rinowedzerwazve uye kuzvishandisa pachako?
E.ON inokurudzira vashandisi vayo kuti vazvidye-yega uye vanozoshandisa sisitimu inonzi SolarCoud iyo inobvumidza kugadzira uye kuchengetedza magetsi. Ramangwana rekuzvishandisa-wega
Dzimba dzezuva, dzimba dzeramangwana
Dzimba dzezuva dzinogona kuve dzemhando dzakasiyana dzakanakira senge mapaneru ezuva, kushandiswa kwakadzika kwemvura Dzimba dzeramangwana dziri pano.
Iyo PSOE inokurudzira Hurumende kuti iwane mhinduro kune hurombo hwesimba
Munyori mukuru wePSOE akasimudza kudiwa kweHurumende Pact yakakura yekugona kurwisa hurombo hwesimba.
Simba rehurombo rakafanana nechirwere here?
Gore rega rega vanhu vanopfuura zviuru zvinomwe vanofa munyika umo dzimba mbiri pagumi dzisingakwanise kubatidza kupisa. Simba hurombo rinotora kufa.
Simba remumba kuSpain nderimwe remhando yepamusoro muEU
Spain ine mutengo wechishanu wepamusoro muEU yese. Imba yemagetsi yekushandisa inoshandisa 0,237 cents pa kilowatt awa muna 2015.
Imwe yedzimba dzinoshanda kwazvo pasi rese yakavakwa muIbiza
Imwe yedzimba dzinoshanda kwazvo pasi rose yakapihwa muIbiza mumusangano wekugadzirisa magetsi wakagadzirwa naTerravita.
SMEs dzaizochengetedza 1.200 euros pagore nema LED mabhuru
Chidzidzo chakaitwa neEndesa chinoratidza kuti anopfuura 1.200 euros pagore aigona kuponeswa kana maSME akachinja iwo mwenje masisitimu emagetsi emagetsi.
Simba rekushandisa muzvitima rakaderedzwa nekuda kwechimiro chitsva
Boka revanoongorora kubva kuYunivhesiti yeValencia vanokwanisa kudzidza mashandisirwo ezvitima kudzikisa kushandiswa kwesimba.
Imba yekugara muMadrid ine iyo huru yekuisa geothermal kuSpain
Imba yekugara yakavakirwa muMadrid ine simba rakawanda rinowedzerwazve rekuisa geothermal muSpain kuwedzera hunyanzvi.
Schlierberg, nharaunda yeGerman uko ka4 simba rakawanda rinogadzirwa kupfuura rinodyiwa
MuSchlierberg, nharaunda yeGerman muFreiburg, ivo vanogadzira simba rakapetwa kana pane ravanoshandisa nemaawa 1.800 XNUMX ezuva pagore.
Tesla anoti mabhatiri uye zuva rinonongedza nzira yemagetsi yakachipa mumakore gumi
Iyo pairing yebheteri repamba nemagetsi ezuva zvinozokonzeresa nemagetsi akachipa mukati memakore gumi maererano naTesla.
Ionizing vanonatsa mweya
Pakutanga vaidhura, vaiita ruzha uye vasina hushamwari zvakanyanya nharaunda. Nhasi, ionizing mweya yekuchenesa yakagadzirirwa kuchenesa mweya watinofema.
Stanford masayendisiti akagadzira sisitimu yekutonhora zvivakwa pasina kudikanwa kwemhepo inodzora kuburikidza neanoratidza mapaneru
Iyo Popup Imba, imba yekungoita yakavakwa mumazuva mana
Kuvaka imba uine chete screwdriver uye zvishandiswazve zvinhu zvinogona kuita kunge sainzi ngano. Uye zvakadaro ndiko kubheja kuti Multipod Studio neiyo Popup House.
Matipi ekuwacha mbatya pasina kusvibisa
Laundry nderimwe remabasa anoitwa zvakajairika pasina kuyera mhedzisiro yaro, kunwa huwandu hwakawanda hwemvura (kazhinji hunonwa) uye sipo. Ngatione mamwe matipi ekuwacha mbatya pasina kusvibisa zvakanyanya.
Kuzvimirira kwesimba, yega simba rekuchengetedza
Kune vanhu vakazvimiririra, kuburitsa imwe yesimba ravo nesimba nemhepo masisitimu ezuva chinhu chakanaka.
Iwo makadhibhokisi fenicha musika
Pasina nguva refu yapfuura, makadhibhokisi fenicha uye zvinhu zvaive chiratidzo chekushomeka kwevamwe vanyori. Nekudaro, kwenguva yakati rebei, makadhibhokisi fenicha yaonekwa, yakagadzirira kutsiva iyo yechinyakare fanicha yemapuranga.
Iko kushanda kwewaini yevhavha yemhepo inogadzirisa
Iwaini yevhavha yemhepo inogadzirisa mudziyo chinhu chakakosha kune vese avo vane waini yevha uye inoshanda kukwidziridza mhando yewaini.
Mamwe matipi ekuwana emahara akachenesa mvura
Mvura yakasviba inodikanwa kune kumwe kushandiswa kwemudzimba, senge mvura inoshandiswa mune yesimbi simbi, kune iyo steam steam, kana bhatiri.
Yekusuka muchina sipo, kukanganisa kwezvakatipoteredza
Mazuva ano, kushandisa muchina wekuwachisa unosungirwa kushandisa sipo yakakodzera, uye zvakare inoshanda sezvinobvira.
Yingli Solar Solar Energy Mupiro
Simba rezuva rinokwanisawo kupihwa uye izvi ndizvo zvichaitwa nekambani yeIngli Solar, kambani iyo ...
Nanotechnology yesimba rezuva
Kufambira mberi kutsva mumunda wenanotechnology kune hukama nesimba remagetsi ezuva, kunyanya ...
Yemazuva ano uye ecological macheya
Dhizaini iri kuwedzera kufarira zvigadzirwa zvine hushamwari. Muenzaniso weizvi ...
Makomiki anoraswa makapu ekofi
100% mikombe inowora biodegradable ndeyechokwadi
Nguva dzekudzora kushandiswa kwemagetsi
Nguva zviridzwa zvinotibatsira kuchengetedza simba
Yainzwa, chinhu chakazvipoteredza
Yainzwa chinhu chemagariro chinotendera kugadzirwa kwezvinhu zvakasiyana
IUK uye magetsi anovandudzwa emagetsi muna 2030
Iyo UK uye simba rinowedzerwazve
Solar powered ngoro dzegorofu
Ngoro dzinoshanda nesimba rezuva dzinofambiswa negorofu
Lithium polymers yekugadzira iyo lithium ion mabhatiri
Nyowani rechargeable lithium ion mabhatiri
Disposable asi zvipenyu akachekwa
Disposable cutlery inogona zvakare kuve ecological
Zvidhinha zvinotora CO2
Yakaderera nharaunda inokanganisa zvidhinha
Renewable energy mumahotera
Zvishoma nezvishoma, simba rinowedzerwazve riri kupinda muhotera, nekuti mazhinji macheni ehotera anofunga ...
5 Zvikonzero nei nharaunda ichifanira kudzokorora
Pane zvikonzero zvinoverengeka nei nharaunda ichifanira kudzokorora
Iwo mafiriji akasvibirira pamusika
Pamusika pane akati wandei mamodheru eecco mafiriji
Kusvuta kunosvibisa nharaunda nekuwedzera kune kukuvadza hutano
Kusvuta kunokuvadza nharaunda
Dzimba dzeGreen dzakakosha kwazvo mumusika wezvivakwa
Dzimba dzeGreen inzvimbo huru yekudyara zvivakwa
Natural uye ecological mamaki
Nhasi zvinokwanisika kutenga zvigadzirwa zvepamusha zvakaita semakapeti
Bamboo fanicha ndeye eco-hushamwari sarudzo yemusha kana hofisi
Nei zvigadzirwa zvakagadzirwa zvichidhura?
Organic zvigadzirwa nemutengo wavo
Gasi kana magetsi magetsi
Nhasi unogona kusarudza pakati pevabiki vegesi uye vekubika magetsi emba yedu
Iyo yeFrench brand FYE inopa ecological shangu
Iyi inotevera Gunyana 11 vanovhura chivakwa uye mamuseum kuti varangarire avo vakarwiswa
Zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi marara
Pane hunyanzvi huviri hwekushandisa zvakare matekinoroji zvigadzirwa
Plantbook, inyowani uye ecological Laptop
Rudzi rwePlantbook rwetekinoroji runogadzikana chaizvo
Ongororo pamusoro pekudyiwa kwehutsanana uye zvigadzirwa zvemamiriro ekunze
Ongororo yakaitwa pane zvakatipoteredza uye nehukama hwega zvigadzirwa munyika dzinoverengeka
Ongororo pamusoro pekushandisa uye mota dzemagetsi
Ongororo inonakidza pamusoro pekudyiwa kwemotokari dzemagetsi munyika gumi nematanhatu
Inodyiwa uye inogadziriswa makapu
Makapu anodyiwa uye anogadziriswa zvigadzirwa kuti atarisire nharaunda
Tsvina yemhuka kugadzira pepa
Tsvina yemhuka inogona kuve mbishi yekugadzira mapepa
5 zvikonzero zvekutenga bhasikoro remagetsi
Bhasikoro remagetsi inzira yekufambisa yekufambisa
Tomato uye pepper masara anosimudzira kugadzirwa kwebiogas
Matangi etomatisi uye mhiripiri anowedzera kugadzirwa kwebiogas
Organic tsvina inogona kugadzira manyowa akagadzirwa zvakanaka
Organic marara inogona kushandiswazve kuita manyowa kana manyowa kuti ishandiswe sefetiraiza yezvirimwa zvedu. Mabhini madiki emakomputa anotengeswa pamusika nawo, nenzira yakapusa, tinogona kuburitsa manyowa.
Varume vanoshandisa simba rakawanda kupfuura vakadzi muhupenyu hwavo hwezuva nezuva uye vane simba rakakura pane zvakatipoteredza
Ongororo ichangobva kuitwa inoratidza kuti vakadzi vanoshandisa simba kushoma pane varume uye kuti zvavanoita zuva nezuva hazvina zvazvinoita pamagariro.
Ecological mbeva yekombuta yako
Iyo Genius kambani yakaratidza yakateedzana mbeva dzezvakatipoteredza
Mexico neiyo nyowani biomass simba chirimwa
Iyo nyowani yekugadzirisa chirimwa ine biomass simba muMexico inovimbisa kuburitsa yakachena simba yekumira zvichienderana nefossil fuels
Ecological hemp zvidhinha
Hemp zvidhinha inyaya yezvakatipoteredza yekuvakisa
Ekodhi kadhibhodhi fenicha
Kadhibhodhi fenicha isarudzo yezvakatipoteredza yemusha wedu
Dzimba dzematanda ndeimwe nzira yezvakatipoteredza
Dzimba dzematanda ndeimwe nzira yezvakatipoteredza sezvo chiri chinhu chinowedzerwazve. Iyo ine yakanakisa insulating mashandiro, yakaoma uye inoshanda kuvaka.
Kutonhora kwezuva: mapaneru ezuva anoburitsa kutonhora kwemhepo kutonhodza
Izvo zvinokwanisika kuwana kutonhora kubva ku photovoltaic solar panels kuti ishandise mhepo inogadzirisa nenzira yezvakatipoteredza: kuderedza kushandiswa kwesimba uye CO2 emissions
Kugadzirwa kwemabhuku akadhindwa kunosvibisa nharaunda
Kugadzirwa kwemabhuku akadhindwa kunoenderera nenzira dzinosvibisa nharaunda uye mukugadzirwa kwayo kunokosha kutema mamirioni emiti pagore. Iyo yemagetsi bhuku e-bhuku ndeimwe greener imwe.
Maguta epasi akavhenekerwa nemwenje ye LED
Maguta nemaguta kutenderera pasirese akaisa mwenje yeLED muchiedza cheveruzhinji sezvo vachigadzira simba rakawanda rekuchengetedza uye vachideredza mweya weCO2.
Migwagwa inogona kuburitsa kinetic simba
Injiniya weChirungu Peter Hughes akagadzira matombo anoshandisa kufamba kunoitwa nekupfuura kwemota kugadzira simba uye kupa mwenje yeruzhinji kusvika padanho re1,5 km.
Maitiro ekuisa microwave uye chengetedza simba
Kubika mu microwave kunochengetedza pakati pe60 uye 70 muzana yesimba rekushandisa, zvinoenderana neIDAE. Muchikamu chino tinotsanangura mashandisiro atinofanira kubika mu microwave kuti tiwane mibairo yakanaka.
Nguva yekubhadhara yekudyara musimba rinowedzerwazve
Usati waita chero kudyara, mumwe wemibvunzo yekuongorora inguva yekudzoka kwekudyara. Zvimwe…
Mahotera emahotera: zvine chekuita nekushanya sarudzo
Mahotera eGreen anofanirwa kusangana nezvimwe zvinodiwa kuti akwanise seizvi. Ivo ndeimwe nzira yekudzidzira zvine mutsigo uye zvine mutsindo kushanya.
Imba otomatiki, zviwanikwa zvekugadzira dzimba dzezvakatipoteredza
Kumba otomatiki tekinoroji yekucheka-iyo inopa dzimba nerunyararo, chengetedzo uye kuchengetedza simba. Inosanganisira iyo otomatiki emasevhisi uye zvinhu zveimba kugadzirisa mashandisiro emagetsi, chengetedzo uye kugadzikana kwemusha.
Dzimba dzeBioclimatic (4). Patios inonaya.
Isu tinoenderera mberi takazvipira kuendesa bicoclimatic nzira dzekuvaka kuti dzigadzire dzimba dzinotora mukana weakasikwa mamiriro enharaunda yavo ku ...
Bioplastic inogadzirwa neminhenga yehuku
Bioplastic isarudzo yeramangwana kutsiva peturu-yakavakirwa plastiki
Dzimba dzeBioclimatic (3). Thermal voga
Thermal kuputira chishandiso chakanakisa kuchengetedza simba nekuti inoshanda sechipingamupinyi chemhepo kubva kunze kuti ipinde mukati meimba.
Dzimba dzeBioclimatic (2). Kuyambuka kufefetedza
Mune ino chinyorwa ini ndinotsanangura mamwe matanho akapusa ekuisa mweya mumba nenzira yechisikirwo uye kuchengetedza mari nesimba.
Dzimba dzeBioclimatic (1). Maodzanyemba maitiro
Dzimba dzinoshandisa nharaunda kugadzirisa zviwanikwa zvemagariro senzira yekuchengetedza simba, mari uye kuita zvivakwa zvinoremekedza nharaunda.
5 zviito zvakapusa kudzikisira kabhoni tsoka
Nezviito zvakapusa tinogona kudzora tsoka yedu yekabhoni
Kuchengetedza magetsi munyika dzakasimukira
Kuchengetedza magetsi kwakakosha munyika dzakabudirira
Yechitatu indasitiri shanduko inoenderana nesimba rinowedzerwazve
Bioplastics kugadzira zvigadzirwa zvemagetsi
Bioplastics ichave mhinduro hombe kuti uwane zvigadzirwa zvemagetsi
Marobhoti emagetsi ari kuwedzera kushandiswa mumaguta
Zvisikwa zvinopisa zvinoputira imba yedu
Thermal kuputira nezvinhu zvepanyama ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekuchengetedza simba pamba
Simba rezuva rekuisa padenga kana pasi?
Simba rezuva uye kuiswa kwaro kwakasiyana padenga kana pasi
Greenfreeze tekinoroji mafiriji ndiwo akanyanya kuchena kana nharaunda
Unochengetedza marii nesimba rezuva?
Simba rezuva rinoponesa zviwanikwa nemari
Ford ichaisa simba rekuchengetedza magetsi mumotokari dzayo
Ford ichaisa system yekuchengetedza mafuta
Kutakura zveMaritime uye CO2 choutsi
Kufambisa kwemakungwa chikamu chinopa zvakawanda kukusvibisa
Iyo indasitiri yekutaurirana uye simba rinowedzerwazve
Indasitiri yenharembozha inoda simba rinowedzerwazve kuti igare yakasimba
Flex mota dzemafuta
Flex mota dzemotokari ndeimwe nzira kune avo vane hanya nezve nharaunda sezvo vachishandisa ethanol semafuta
Matipi ekusarudza maseru ezuva eimba yedu
Sekutsigirwa uye rubatsiro rwesimba rezuva kuwanda, vanhu vazhinji vanokurudzirwa kutenga mapaneru ezuva ...
Mahotera ane simba rezuva
Iyo indasitiri yehotera chikamu chakakosha chehupfumi sezvo paine zviuru zvemahotera eese saizi pasirese….
5 Zvikonzero zvekuisa masolar panels kumba
Solar tekinoroji ndeimwe yemagetsi anovandudzwa uye akachena, imwe yeanonyanya kusimukira mu ...
Chinzvimbo chemakambani ane hunyanzvi hwenzvimbo dzakatipoteredza
Kwemakore mashoma, Greenpeace yakaburitsa mushumo uko inoongorora maitiro ezvakatipoteredza emakambani eetekinoroji. Muizvi…
Munyika dzese, kudzokorora kuri kusimudzirwa kwete chete kudzikisa huwandu hwetsvina asiwo kubatsira ...
Simba rezuva rine mashandisirwo akawanda, chimwe chezvishoma zvakagadziridzwa kushandiswa kwemabasa ekurima. Unyanzvi uhu…
Africa uye simba rinowedzerwazve
Africa ine 15% yevagari vepasi rese mudunhu rayo rakakura uye iri kondinendi ine hurombo hwakanyanya ...
Solar mhepo inogadzirisa
Zvakatipoteredza zvine hushamwari zvigadzirwa zviri kuve zvakajairika munzvimbo dzese asi imwe yezvikamu ...
Makomputa ane hushamwari
Nhasi munyika mune mamirioni emakomputa kana makomputa uye kugadzirwa kwavo uye kushandiswa kuri kuramba kuchikura nguva dzose, saka ...
Chikamu chekushanya uye simba rinowedzerwazve
Chikamu chekushanya chinosanganisira mahotera, mahotera, nzira dzekutakura, kufamba uye zviitiko mune zvakasikwa, nezvimwe. Ichi chikamu ...
Iyo kabhoni tsoka uye inowedzerwazve simba
Iyo kabhoni tsoka ndeye chishandiso kuyera iyo greenhouse gasi inoburitsa yemunhu, sangano, ...
Eco zvivakwa uye simba rinowedzerwazve
Zvivako zvakasvibira zvishoma nezvishoma zviri kuwedzera munyika dzakabudirira. Zvishoma nezvishoma vari ...
7 Matipi ekuchengetedza simba
Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva tinoshandisa simba uye kazhinji hatizive kuti tiri kushandisa zvisirizvo ...
Biogas inzira yezvakatipoteredza yekugadzira gasi. Iyo inogadzirwa nekuora kwemarara kana chinhu chakasikwa. The…